Book of material - alinkarnang - Wattpad
#myanmar #action #adventure #fantasy #translation
သရဲဘုရင်ရဲ့ချစ်ဇနီးဆိုးလေး Book(3) Using Two Font... Zawgyi & Unicode
121K 12K 108
အပိုင်း(၄၁၃)မှ ၇၇၉ အထိ Complete
ထာဝရအသကျရှညျလိုသျော အတှဲ ( ၄ ) ( ဓားစာခံတဈယောကျ၏ ခရီးကွမျး )
11.8K 2.5K 134
အတှဲ ( ၄ ) မှာတော့ ပိုငျရှောငျခနျြးရဲ့ ကငျြ့ကွံခွငျးလမျးစဥျခရီးကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ
ထာဝရအသကျရှညျလိုသျော အတှဲ ( ၃ ) ( အဏ်ဏဝါချေါသံဂိုဏျး အရှိနျအဝါကွီးမားလာခွငျး )
7.7K 1.2K 53
ထာဝရအသကျရှညျလိုသျော စာစဥျ အတှဲ ( ၃ ) ဖွဈပါတယျ
ထာဝရအသကျရှညျလိုသျော အတှဲ ( ၂ ) ( ဒဏ်ဍာရီထဲက ညမုဆိုး )
29.1K 4.2K 144
ဒဏ်ဍာရီလာညမုဆိုးရဲ့ တလှဲလေးတှေ/ မိတျဆှမြေားအပျေါ အသကျနှငျ့ရငျးပွီး ခဈြမွတျနိုးတာတှကေို မွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒဏ္ဍာရီလာညမုဆိုးရဲ့ တလွဲလေးတွေ/ မိတ်ဆွေများအပေါ် အသက်နှင့်ရင်းပြီး ချစ်မြတ်နိုးတာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထာဝရအသက်ရှည်လိုသော် အတှဲ ( ၁ ) ( ကြုပျက ပိုငျရှောငျခနျြး )
81.4K 9.6K 188
Unicode ထာဝရအသကျရှညျလိုသျော စာစဉျ မိတျဆကျ ဤစာစဉျသညျ သရေမညျကိုကွောကျကာ ထာဝရအသကျရှညျသညျ့နညျးလမျးကို စှဲလမျးတပျမကျစှာ ရှာဖှနေပွေီး မိသားစုနှငျ့ မိတျဆှမြေားအပျေါတှငျလညျး သံယောဇဉျတှယျလှနျးသညျ့ လူငယျလေးတဈယောကျ အကွောငျးကို လူ့စရိုကျပီပွငျစှာ ဟာသဆနျဆနျ ရေးသားထားသော အထူးကောငျးမှနျသညျ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျဖွဈပါသညျ။ တခြို့နရောမြား...
万域之王 (Book - 6)
28.2K 4K 200
LORD OF ALL REALM (​လောကအားလုံးရဲ့သခင်​) -------------------------------------------- မူရင်း​ရေးသားသူ - Ni Cang Tian -------------------------------------------- စာစဉ်​ဘာသာပြန်​သူ - Hein Htet --------------------------------------------
万域之王 (Book - 5)
79.4K 7.3K 200
LORD OF ALL REALM (​လောကအားလုံးရဲ့သခင်​) မူရင်း​ရေးသားသူ - Ni Cang Tian စာစဉ်​ဘာသာပြန်​သူ - Hein Htet -------------------------------------------- ဟိုးအရင်​နှစ်​​ပေါင်းများတုန်းက ​ကောင်းကင်​ဘုံကို ကူညီ​ပေးတဲ့ ဝိဥာဉ်​ကြီး​တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်​။ သူတို့မှာ ကြယ်​​တွေကဲ့သို့ ကြီးမားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​​တွေရှိပြီး စကြာဝဠာ တစ်​ခ...
​ကောင်းကျိုးမ​ပေး​သော သမီးပျို ကောငျးကြိုးမပေးသော သမီးပြို
561K 67.1K 205
ကောင်းကျိုးမပေးသော သမီးပျို မူရင်းစာရေးဆရာ	- North Night မူရင်းဝတ္ထု -The Good for Nothing Seventh Young Lady ဘာသာပြန်	-NEVER စာမြည်း ၂၄ရာစုရဲ့ စောရဘုရင်မဖြစ်သော သူမဟာ ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးသူ မိဘမဲ့ ငပိန်းတစ်ယောက် ကိုယ်ထဲကို ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါတင်မကသေး သူ့အမျိုးတွေက စိတ်မကြည်ရင် မကြည်သလို နှိပ်စက်တာကိုခံရသေးတ...
Rebirth of an Urban Immortal Cultivator (Book-1)
230K 23.7K 201
မူရင်း​ရေးသားသူ- Ten Miles Sword God ဘာသာပြန်​​ခေါင်းစဉ်​ - မြို့ပြနတ်​ဘုရား ဘာသာပြန်​ဆိုသူ - ဂီတမိုင်​ချီ (၁ မှ ၁၁၉ ထိ) - ​နေသူရိန်​လင်း (အပိုင်း ၁၂၀ မှ . . .) ချန်းဖန်​ဟာ ဆယ်​​ကျော်​သက်​​ကောင်​​လေးအဖြစ်​ ပြန်​လည်​​မွေးဖွားပြီး​နောက်​ အရင်​...
ကောငျးကငျဘုံ စာကွညျ့တိုကျ စာစဉျ ၄၁ မှ ၄၇
308K 50.6K 101
မူရငျး - Library of Heaven's Paht မူရငျး စာရေးသူ - Heng Sao Tian Ya ဘာသာပွနျသူ - DrZone All credit goes to original author. Follow my translations on facebook and Wunzinn Book Store ( facebook page name- Personal Sketch)
ကောငျးကငျဘုံ စာကွညျ့တိုကျ စာစဉျ ၄၈ မှ ၅၅
283K 53.8K 120
125K 10.8K 201
PMG အတွဲ ( ၁ )
487K 68.6K 206
365K 46.4K 201
(ပွိုငျဘကျကငျးဆေးနတျဘုရား) ခငျြယနျကြိဟာ သစ်စာဖောကျတဈယောကျ လကျခကျြကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရတယျ။အရာအားလုံးပွီးဆုံးသှားပွီလို့ ထငျရပမေဲ့ တကယျတမျးမှာတော့ မပွီးဆုံးခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ယီယှမျ လို့ချေါတဲ့ သူဋ်ဌေးသား တဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ပွနျလညျနိုးထအသကျဝငျလာခဲ့ရတယျ... ခဈြခငျရတဲ့သူတှေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို စိတျသကျသာရာ ရအောငျ ရုနျးကနျ...
နတျဘုရားမုချဝ အတှဲ ၂ နတ်ဘုရားမုခ်ဝ အတွဲ၂ (201-355)
34.4K 3.9K 121
ဒါလေးကတော့ နတ်ဘုရားမုခ်ဝ ဒုတိယ စာအုပ်လေးပါ။ အပိုင်းက 1520 ပိုင်း ရှိမှာမို့ စာအုပ်က 8 အုပ်ရှိမှာပါ။ အတွဲ ၁ ( အပိုင်း 1- 200) ခု အတွဲ ၂ ( အပိုင်း 201-400)
နတျဘုရားမုချဝ အတှဲ ၁ နတ်ဘုရားမုခ်ဝ အတွဲ ၁
314K 44.3K 203
Unicodeကော zawgyiပါ တငျထားတယျ။အလှနျကို ထူးဆနျးပွီး နားလညျဖို့ ခကျခဲတဲ့ ကမ်ဘာတဈခု ရှိတယျ။ ရေ မွေ တော တောငျ သဘာဝတှေ သဈပငျပနျးမနျတှေ... ကောငျးကငျဘုံနဲ့ ကမ်ဘာမွကွေားက ဖနျတီးမှုအားလုံး အရာအားလုံးဟာ စှမျးအငျအရငျးအမွဈတှေ ဖွဈကွတယျ။ ဒီကမ်ဘာမှာတော့ သူ့ရဲ့အရငျမူလကမ်ဘာနဲ့ အကုနျနီးပါးတူပသေျောငွား ထပျတိုး ဖွညျ့စှကျခကျြတဈခု...
ကောင်းကင်တံခါးကို ငါပိတ်မယ် (စာစဉ် ၁ - ၂)
26.3K 2.8K 21
#ကောင်းကင်တံခါးကို ငါပိတ်မယ် "ငါလိုချင်တာ မိုးကောင်းကင်က ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ ငါမလိုချင်တာ ဒီကောင်းကင်မှာ မရှိသင့်ဘူး။" ဒါကတော့ အဋ္ဌမ နဲ့ န၀မမြောက် တောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကြီးသူနိုင်စတမ်း ဥပဒေသပဲ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့ စာချိုးလေးပါ။ "ငါ့ နာမည်က မန်ဟို... န၀မမြောက် မိစ္ဆာဖမ်း မျိုးဆက်.. ကောင်းကင်တံခါးကို ငါပိတ်မယ်။" Origina...
ကောင်းကင်ဘုံ စာကြည့်တိုက် စာစဉ် ၁ မှ ၁၀
760K 111K 127
မူရင်း - Library of Heaven's Paht မူရင်း စာရေးသူ - Heng Sao Tian Ya ဘာသာပြန်သူ - DrZone All credit goes to original author. Follow my translations on facebook and Wunzinn Book Store ( facebook page name- Personal Sketch) ကျန်းရွှမ်သည် အခြားကမ္ဘာတခုသို့ အချိန်ကာလကို ဖြတ်ကျော်ကာ ရောက်ရှိသွားသူဖြစ်သည်။ ထိုကမ္ဘာကြီးသို့ ရောက...
ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒဏ္ဍာရီ (စာစဉ် ၁၁)
4.2K 220 1
အကျဉ်းချုံး Xianxia world ( ဗုဒ္ဓ နှင့် တာအို ၀ါဒကို အခြေခံထားတဲ့ သိုင်း ၀တ္ထု အမျိုးအစား) Desolate era လို့ခေါ်တဲ့ အဆုံးမဲ့ ပျက်စီးမှုတွေသာရှိတဲ့ အချိန်ကာလမှာ မျိုးနွယ်စုတွေဟာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် မိုးကောင်းကင် ၊ ကမ္ဘာမြေကြီး နဲ့ နတ်ဆိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နေကြ၇တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မသေခြင်းလမ်းစဉ်ကို ကျင့်ကြံသူတွေဟာ ပျက်စီးခြင...
ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒဏ္ဍာရီ (စာစဉ် ၁မှ စာစဉ် ၆ ပထမတွဲအထိ)
214K 24.1K 103
ဓားတန်ခိုးရှင်၏ ဒဏ္ဍာရီ (စာစဉ် ၆ ဒုတိယတွဲ - စာစဉ် ၈ အထိ)
97.5K 10.8K 62
4.4K 154 1
ဟော့ကျွေးအန်း (huo zhui en) သူ မမွေးခင်ကတည်းက အဖေနှစ်ယောက် ကတိထားခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသား တယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ ၇ွှီးညန့်ကျုံး (Xue Nian Zhon ) သူ့ဖခင်၇ဲ့ ကတိစကားကြောင့် သူတို့သမီး တောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ သားကို သမီး ဆိုပြီး လိမ်ညာ ပေးစားခြင်း ခံလိုက်၇တယ်။ မိုး 📝ေ၇းဖို့ စိတ်မကူးဘူး။ လာသိမ်းတာ 😂😂😂
786K 66.7K 102
199K 24.4K 25
ဒီဇာတ်လမ်းက ရုတ်တရက် ဈာန်ဝင်လာပြီး ရေးထားတာပါ၊ ပြု တု စု ပြုလုပ်ထားတဲ့ သဘောတရား အများကြီး ပါဝင်တာမို့ စွဲအပိုင်ပါလို့ မပြောရဲပါဘူး၊ ဖန်တီးတင်ဆက်သည်။ လို့ ရိုးရိုးလေးပဲ ပြောပါရစေ။
Prime Minister In Disguise::Book I(TRANSLATION)
1.4M 139K 106
ထူးချွန်​တဲ့လူငယ်​တစ်​ဦးက သူ့ညီမ​လေးအတွက်​ မိန်းက​လေးအဖြစ်​ နန်း​တော်​ထဲဝင်​ပီး အရှင်​မင်းကြီးရဲ့နှစ်​သက်​မှုကို ရ​အောင်​လုပ်​ဖို့ဖြစ်​လာတယ်​....။ရှုပ်​​ထွေး​ပွေလီလွန်းတဲ့ ​မောင်းမ​ဆောင်​ကအပျိုထိန်းရဲ့အုပ်​ချုပ်​မှု​အောက်​မှာ သူဘာ​တွေကြုံရမလဲ...။သူရယ်..​အင်​ပါယာအရှင်​နဲ့ ဝန်​ကြီးချုပ်​တို့ကြားမှာဘာ​တွေဖြစ်​လာမလဲ...
King Of The Villain(ဗီလိန်​ဘုရင်​)/(ဗီလိနျ​ဘုရငျ​)
137K 15.4K 23
ရှီရှန်း၊ယွမ်​ရှန့်​၊​မေ​ရှောင်း၊ရှန့်​ခယ်​တိုိ့လို Host,system Fic ​လေးပါ Yaoi ,bl ပါ plot ​တွေကိုအတတ်​နိုင်​ဆုံး အ​ကောင်းဆုံး​ရေးသားမှာပါ...(>‿◠)✌ ဒါ Translation မဟုတ်​ပါ​နော်​။ #OwnCreation #OwnCreation #OwnCreation ပါ​နော်​။ အချစ်​တို့။
Scum Of Soul _SOS (ခပ်​တုံးတုံးဝိညာဉ်​)/(ခပျ​တုံးတုံးဝိညာဉျ​)
4.7K 607 4
ထိန်းချုပ်​ခံရသည့်​ ဝိညာဉ်​ မှန်​သမျှ ဥာဏ်​​ကောင်းလွန်းပါတယ်​...။ ဒါ​ပေမယ့်​.. .ဒီဝိညာဉ်​ကြမှဘာ​ကြောင့်​..ဒီလိုတုံး​နေရတာလဲ...နားမလည်​နိုင်​​တော့ဘူး...။ "101...အဓိကဇာတ်​လိုက်​ မင်းကိုသတ်​ဖို့လုပ်​ကြံ​နေပြီလက်​တုန့်​မပြန်​ဘူးလား..." "System ​လေး..ငါ​ကြောက်​တယ်​..တွင်းရှာရမယ်​..ပုန်း​ရမယ်​..ပုန်း​ရမယ်​..အဓိကဇာတ်​လိ...
799 66 3
"စွယ်​​တော်​​လေးဆူအား.. သက်​​သေပြု၍​တောင်းဆု​ချွေသည်​... အကျွနု​ပ်​၏အချစ်​သည်​မှန်​ကန်​​စေကာမှူ... သူ၏အချစ်​နှင့်​ထပ်​တူကျရပါလို၏...။" _________________________________________________ ပုဂံ​ရှေး​ဟောင်းအ​မွေအနှစ်​သမိုင်း​ကြောင်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၏အလှအပယဉ်ေ​​​​ကျးမှုများအား​နောက်​ခံပြု၍​လေးနက်​စွာဖြင့်​ဤ၀တ္ထုကိုဖန်...
ကောင်းကင်ဘုံ စာကြည့်တိုက် စာစဉ် ၁၉ မှ ၂၆
407K 70.7K 105
၂၀ရာစုတွင် ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်း ( Rebirth In 20 Century )
1.3M 173K 60
"ကျွန်တော် အခုဘယ်ရောက်နေတာလဲ?" ရေနံချေးဝနေတဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးထဲမှာ မီးအိမ်က အလင်းတစ်ခုပဲ ဖြာကျနေတယ်။ရေဒီယိုလို့ ယူဆရတဲ့ လေးထောင့်ဆန်ဆန် အရာဝတ္ထုလေးထံက ပျံ့လွှင့်လာတာ က သူနဲ့ အတော်လေးမရင်းနှီးလှတဲ့ ၂၀ရာစုလောက်က မြန်မာသံစဉ်တွေ။ ဘေးအခန်းနံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို အကြည့်ရောက်တော့ သူအံ့သြလွန်းလို့ အသက်ရှုတောင်ရပ်သွားသလိ...